အိုးဝေ: ချက်ဟော့(ဗ်) ပြောခဲ့သော စကားအချို့
ချက်ဟော့(ဗ်) ပြောခဲ့သော စကားအချို့
အန်တွန် ပါဗလိုဗိ(ခ်ျ) ချက်ဟော့(ဗ်) ပြောခဲ့တဲ့ စကားအချို့ပါ။
Никому не следует читать своих вещей до напечатания. Никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал - пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым...
ကိုယ်ရေးထားတာတွေကို စာအုပ်အနေနဲ့ မထုတ်ရသေးရင် ဘယ်သူကိုမှ ဖတ်မပြနဲ့။ တခြားလူတွေ အကြံပေးတာတွေကို ဘယ်တော့မှလည်း နားမထောင်နဲ့။ မှားပလေ့စေ၊ လိမ်ထားတာတွေပါပစေ၊ အဲဒီအမှားတွေက မင်းနဲ့သာ ဆိုင်ပလေ့စေ။ အလုပ်လုပ်ရာမှာ သတ္တိရှိဖို့လိုတယ်။
Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лёд.
ရေခဲတုံးအေးသလို စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်နေပြီဆိုမှ စာကိုရေးရမယ်။
Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрёт с голоду, если будет потакать своей лени.
စာရေးဆရာဆိုတာ သူတောင်းစားဖြစ်နေရမယ်၊ အဲသလိုအခြေနေဖြစ်နေမှ သူ့ရဲ့အပျင်းစိတ်ကို အလိုလိုက်လိုက်ရင် ငတ်ပြီးသေသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်အောင်လို့။
Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ и Гималаи...
စာရေးဆရာဆိုတာ အလွန့်ကိုချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်၊ ဒီလိုချမ်းသာမှ သူသွားချင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်သင်္ဘောနဲ့ ကမ္ဘာကိုပတ် ခရီးထွက်နိုင်မှာပေါ့၊ နိုင်းမြစ်ဖျားခံရာကို လေ့လာရေးသွားနိုင်မယ်၊ တောင်ဝန်ရိုးစွန်းကို လေ့လာရေးသွားနိုင်မယ်၊ တိဘက်၊ အာရေးဗီးယားကို သွားနိုင်မယ်၊ ကော့ကေးဆပ်တောင်တန်းတွေနဲ့ ဟိမ၀န္တာတောင်တန်းတွေကို ၀ယ်နိုင်မယ်လေ။
Толстой говорил, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор – три аршина земли нужно мёртвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно – писателю.
လူတစ်ကိုယ်အတွက် မြေက ၇-ပေလောက်ပဲလိုတာပါလို့ - တော်(လ်)စတွိုင်းက ပြောခဲ့တာကို၊ ချက်ကော့(ဗ်)က - အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး၊ ၇-ပေလောက်မြေဆိုတာက အသက်မရှိတဲ့လူအတွက်တော့ ဟုတ်တာပေါ့၊ အသက်ရှင်နေတဲ့လူအတွက်က ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးလိုအပ်တယ်၊ အထူးသဖြင့် စာရေးဆရာအတွက်ပေါ့။
Posted by ဇနိ at 10:50 PM
Telegram (Konstantin Paustovsky)